ओडिशा सप्ताहांत Getaway | सप्ताहांत यात्राहरूको लागि उत्तम गन्तव्य
यात्रा खासगरी जब हामी9मा5मा हप्तामा काम गर्छन डिजाइन गर्न निरन्तर कठिन छ। तर सप्ताहांतको बारेमा के हो? त्यहाँ 52 सप्ताहांत वर्ष भन्दा बाहिर छन्। तपाईं कसरी खर्च गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? धेरै व्यक्ति जसले यात्रा बाट टाढा बाशुलै आधारमा आधारमा सोचेका छन् कि उनीहरुसँग कुनै पनि ठाउँ र किनमेल सपिङ्ग वा फिल्म थियेटर जाने पर्याप्त समय छैन। कुनै पनि अवस्थामा, यो बाँच्ने सबैभन्दा राम्रो तरीका होइन! आफ्नो सप्ताहांत बलियो गर्न सबैभन्दा सबैभन्दा सरल दृष्टिकोण होडिडा पिबल्स टुरसहरूको साथ ओडिशा सप्ताहांतमा पुग्ने ड्राइभ भ्रमणमा छ।
यात्राको मतलब साँच्चै मतलब छैन कि तपाईं आफ्नो गन्तब्यमा पुग्नको लागि विशाल संख्यामा उडान गर्न आवश्यक छ। कहिलेकाहीँ तपाईलाई आवश्यक पर्दछ सप्ताहांत र एक ईन्टर ईन्जिनको पूर्ण ट्यांकको साथ।
लोकप्रिय सप्ताहांत पर्यटन स्थलहरू चल्ने सुरुवात भ्रमण प्याकेजहरू विदेशी र घरेलु पर्यटकहरूबीच घोर हिट हुन थाले। यस उपन्यासमा ध्यान दिन प्रयास गर्ने हप्ता हप्ताको अन्त्यका विभिन्न रुचिहरु सशक्त पिबल्सले उत्साही वर्तव्य बनाउनको लागि सशक्त बनाएको छ र यसका लागि उपभोक्ताको वफादार र कृतज्ञताको लागी संगठनको लागि उत्पादक संगोष्ठीहरू पनि थपिएको छ। तदनुसार, प्याकेजहरू गहन मूल्याङ्कनमा समावेश भएका छन् भुवनेश्वर, पुरी, कोनर्क, चिलिका, भित्तिकनिका र अधिक।
ओडिशा सप्ताहांत उत्तीर्ण विशेष रूप देखि आध्यात्मिक र विरासत पर्यटन, हनीमून भ्रमण, परिवार र साथीहरु संग साहसिक यात्रा र प्रकृति उत्साही को लागि पर्यटन पर्यटन संग तैयार गरिएको छ।
सबै भ्रमण र संकुलहरूको लागि आवास सबै पर्यटक केन्द्रहरूमा नाश्ता समावेश गर्दछ। सबैभन्दा आधुनिक बेडा लक्जरी कार र कोचहरू अनुभवी र प्रशिक्षित चौफर्स ग्राहकहरु को आदेश मा छन्। ओडिशामा सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्यहरूमा ग्राहकहरुलाई समायोजन गर्नको लागी नवीनतम दिमाग उड्ने सुविधाहरू सहित सुरुचिपूर्ण होटेलहरू व्यवस्थित छन्।
आध्यात्मिक यात्रा प्याकेज ओडिशा
भुवनेश्वर अद्भुत यात्रा
भुवनेश्वर-कोनर्क-पुरी टूर प्याकेज